lundi, 07 septembre 2020 20:19
Tsy fanarahan-dalàna nataon’ny fitondrana: Nanatitra taratasy fitarainana tetsy amin’ny HCC ireo Loholona
Manoloana ny tsy fanarahan-dalàna nataon’ny fitondram-panjakana tamin’ny fandraisana fanapahan-kevitra mahakasika ilay volavola-dalàna laharana faha 001/2020, dia tonga nanatitra taratasy momba ny fitorohana ny tsy fanarahan-dalàna tamin’ny fomba narahina tamin’ny “texte à valeur législative” araka ny voalaza ao amin’ny andininy faha-118 ny Lalampanorenana tetsy amin’ny Fitsarana Avo momban’ny Lalampanorenana na HCC ireo solotenan’ny Loholon’i Madagasikara izay notarihan’Atoa Mamitiana Fabergé Gabriel, androany alatsinainy 07 septambra 2020.
Nambaran’ny Loholon’i Madagasikara Mamitiana Fabergé fa nanomboka tamin’ny famoahana ny vokatry ny fivorian’ireo vaomiera iraisana isasahana dia efa nisy ny tsy fanarahan-dalàna izay nolazainy fa i Madagasikara dia misy Antenimiera roa, ka ny tatitra izay noentina tany amin’ny Praiminisitra Lehiben’ny Governemanta dia tokony tatitra voasonian’ny Filohan’ny Parlemanta roa tonta.
Anisan'ny sehatr'asa betsaka tsy mahafantatra ity resaka fitaterana ity, eny na ireo mitazana avy tety ivelany ka nahita ny firoboroboan'ny varotra sprinter dia tafalatsaka ao anatiny.
Ilaina fanaraha-maso be tokoa ny asa, ary dia mila manana fiara hafa anaovana izany, na dia anaovana dépannage sy hanatonana aingana ny fiara raha misy manjo azy, na sanatria misy accident.
Matetika heno ny fitenenena hoe, matoa maro mpanao dia bizina mandeha izany, ka vao mahita 40 000 000ar amin'ny asa hafa dia andao hividy fiara anaovana transport.
Ny zava-misy, ny fiara tsara dia ampanaovina zotra nasionaly aloha, mazava ho azy, lavitra ny lalana mila fiara tsara. Rehefa vizana avy nanao nationale ny fiara dia ampanaovina régionale, ary rehefa reraka izay vao anaovana taxi-be na hitaomana entana eto an-tanàna, sanatria misy fahavoazana dia mba akaiky eto ihany.
lundi, 07 septembre 2020 15:43
Antongomena Bevary – Mitsinjo: Nidoboka am-ponja ny Ben’ny tanàna
Tazomina am-ponja vonjimaika ao Marofoto Mahajanga ny Ben’ny tanàna Antongomena Bevary any amin’ny Distrikan’i Mitsinjo. Fisolokiana miaro seky tsy misy anto-bola no nanenjehana azy.
Naka lavanila taman’olona izy. Namidiny ilay lavanila ary nahazoany vola be nanaovany propagandy tamin’ny fifidianana Ben’ny tanàna ny 27 novambra 2019. Kandida tsy miankina izy, ary voafidy soa amantsara.
Seky tsy nisy anti-bola no nomeny ilay tompon'ny lavanila. Nahatsiaro ho voasoloky ity farany ka nitondra ny raharaha teny amin’ny Fitsarana.
lundi, 07 septembre 2020 15:25
Fampodiana teratany Malagasy: 1273 no efa tafody an-tanindrazana
Teratany Malagasy miisa 250 no nigadona teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato omaly. Avy any Eorôpa izy ireo, ary andiany faha-3 tafody an-tanindrazana hatramin’ny 15 aogositra 2020. Tafakatra 1273 amin’izy ireo no efa tafody an-tanindrazana.
Sidina faha-9 io tonga omaly io hatramin’ny nandraisan’ny fanjakana fanapahan-kevitra nampodiana ireo teratany malagasy tavela tany ivelany, hatramin’ny nikatonan’ny sisintany noho ny fisian’ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara.
Natao fitiliana PCR avokoa ireo mpandeha teo ampahatongavana teny Ivato, na efa nanao izany aza izy ireo nialoha ny niondranana nankaty Madagasikara. Nahiboka avy hatrany izy ireo taorian’ny fakana singa.
Toerana telo no nandefasana azy ireo, dia eny amin’ny « Villa Verte » sy Domaine St François, toerana samy eny Ambatomirahavavy, ary misy koa ao amin’ny hotely Ibis etsy Ankorondrano.
Any izy ireo no miandry ny valin’ny fitiliana natao azy ireo. Afaka mamonjy fianakaviany ireo tsy ahitana soritr’aretina na « négatif ». Alefa tsaboina ao amin’ny CTC Mahamasina kosa ireo ahitana soritr’aretina Covid-19.
lundi, 07 septembre 2020 15:21
Beombalahy-Anjomaramartina: Nodoran'ny dahalo ny tanàna, olona efatra maty voatifitra
Notafihin'ny andian-dahalo mitam-basy ny vohitra Beombalahy, Fokontany Morafeno, Kaominina Anjomaramartina, Faritra Vakinankaratra androany vao mangirandratsy.
40 lahy eo ireo dahalo, miampy ankizy sy vehivavy no nanafika. Nodoran'izy ireo ny tanàna. Trano manodidina ny 50 no may. Tsy nisy azo noraisina ny entana hatramin'ny masomboly.
Olona efatra no maty, roa vavy sy roa lahy. Katekista ny iray amin'ireto farany.
Olona miisa fito maratra mafy, misy voan'ny bala eo amin'ny lohany, tratrany, tongony.
Niezaka namaly ny Fokonolona fa tsy naharesy tosika noho ny hery tsy mitovy.
Nanararaotra ireo dahalo satria saika lasa tany an-dasy, nilasy volamena avokoa ny ankamaroan'ireo lehilahy tao an-tanàna.
Ambaratonga ambony: Tampoka loatra ny fidirana
Tampoka loatra indray ny fidiran’ny ambaratonga ambony, araka ny fimenomenoman’ny mpianatra sasany.
Nanambara ny filoha Andry Rajoelina halina fa ny 2 novambra ho avy izao no fanombohan’ny taom-pianarana vaovao 2019-2020 ho an’ny ambaratonga ambony.
Tsy misy ny taona fotsy ho an’ny oniversitem-panjakana miisa enina sy ireo zanany avy, hoy izy.
Hisokatra rahateo ny lalam-pirenena rehetra, afa-tsy ny mifandray amin’ny RN6 mankany Antsiranana ihany aloha.
Afaka miverina mamonjy ny tanàn-dehibe misy ny oniversite ianarana, noho izany, ireo mpianatra efa lasa nody any aminy avy.
Toy ny akohokely notsipazana fotsim-bary ny maro amin’izy ireo eo anatrehan’ny lamina vaovao.
Tao ireo nihevitra fa mbola amin’ny volana martsa, araka ny vanin’andro vonjimaika naroson’ny minisitera, vao hanomboka ny taom-pianarana vaovao.
lundi, 07 septembre 2020 14:50
07 septembre: Journée mondiale de la myopathie de Duchenne
Maladie héréditaire qui se caractérise par une dégénérescence musculaire progressive, et qui touche généralement les garçons. 99.90% sont des garçons.
De nombreuses personnes souffrant de dystrophie musculaire sont atteintes de la myopathie de Duchenne. Bien que les filles puissent être porteuses de la maladie et légèrement touchées, la maladie touche principalement les garçons.
Les symptômes possibles sont des chutes fréquentes, une difficulté à se lever ou à courir, un dandinement, de gros mollets et des troubles de l'apprentissage.
Il n'existe aucun remède, mais des séances de kinésithérapie et la prise de médicaments tels que des corticostéroïdes peuvent aider à contrôler les symptômes et à améliorer la qualité de vie.
(Source Net: Antoine épris de la vie)